Roobabkii ka da’ay Soomaaliya oo saameyay ku dhawaad 200,000 oo qof | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan, Arrimaha Bini'aadanimada (OCHA) ayaa sheeg in ay tahay wax laga naxo in Soomaaliya ay wajahday labo xaaladood oo kala daran, sida abaaro lagu dhawaaqay 25-kii Abriil oo wali ka taagan gobollada qaar iyo roobabkii dhawaa oo dhibaato xoog leh u geystay ku dhawaad 200,000 oo qof.
Sida laga soo xigtay OCHA, saameynta ay leeyihiiin Abaaraha baahsan iyo Daadadka daran, ayaa uga sii dari kara xaaladda cunta yarida ee heysta xool-dhaqatada iyo beeraleyda Soomaalida, kuwaas oo in ka badan 2.7 milyan oo qof la saadaalinayo in wajihi doonaan cunto yari.
"Intaas waxaa sii dheer, dhibaatooyinkan cimilada waxay sababi doonaan barokac, waxay khatar gelin doonaan helitaanka biyo nadiif ah, waxay gacan ka geysan doonaan kordhinta cudurada ka dhasha biyaha," ayay OCHA ku tiri warbixinteedii ugu dambeysay.
Sida lagu sheegay warbixinta Qaramada Midoobay, daadaku waxa ay sababeen in ay go’aan waddoonka ay mari lahaayeen gaadiidka, si loo caawiyo dadka dhibaatadu gaartay, Waxay xuseen in 2021 qorshaha gargaarka Bina-aadamnimada ee Soomaaliya uu u baahan yahay 1.09 bilyan oo doollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo afar milyan oo qof oo dhibaateysan.
9-kii bishaan, Qaramada Midoobay, waxay sheegtay in ugu yaraan 25 qof ay dhinteen Saddexdii May ilaa Sagaalkii May, sababo la xiriira roobab culus oo ka da'ayay meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya.